Best Chainlink Trading Signals December 2021 | Ultimate Trading Guide!
Izimpawu ezihamba phambili zeChainlink 2021
Ngabe ucabanga ukuhweba nge-Chainlink kepha awazi ukuthi kufanele uqhubeke ngoba udinga ulwazi oluthe xaxa? Uma kunjalo, amasiginali wokuhweba we-Chainlink angaba yisinqumo esifanele kuwe - ikakhulukazi uma udinga usizo lokufunda ukuthi uwafunda kanjani amashadi entengo nezindlela zokucwaninga.
Izimpawu zokuhweba ze-Chainlink zenziwa yiqembu lethu labathengisi abangochwepheshe abanikela ngesikhathi sabo behlaziya izimakethe ze-cryptocurrency.
Le datha izokwakha isisekelo salokho okuhweba ukukubeka nomthengisi wakho wempahla edijithali okhethiwe. Njengesibonelo, isignali yokuhweba ingakutshela ukuthi ungene emakethe ye-Chainlink nge-oda lokuthenga ku- $ 29 bese uyaphuma lapho imali yedijithali ifika ku- $ 38.
Kulo mhlahlandlela, sikukhombisa ukuthi amasiginali wokuhweba we-Chainlink azokuvumela kanjani ukuthi wandise imali yakho oyitshalile ezimakethe ze-cryptocurrency - noma ngabe usaqala.
Thola Izimpawu Zamahhala ze-Crypto Manje!
Yini ama-Chainlink Trading Signals?
Izimpawu zethu ze-Chainlink yiziphakamiso zokuhweba ochwepheshe bethu abazothumela amalungu ethu uma sesibona ukuthi ithuba lokwenza inzuzo seliseduze. Isibonelo, singathumela amasiginali lapho sibona ukuthi uChainlink ubaluleke ngokweqile ngokususelwa ocwaningweni olunzulu - iningi lalo ligxile ekuhlaziyweni kwezobuchwepheshe.
Lapha ku- new.cryptosignals.org, lokhu kufaka nezindlela zokucwaninga ezithuthukile nge-software yokuhlaziya esekela iziphetho zethu. Le datha yilokho okudingayo ukuze ukwazi ukulandela ngokwenza ama-oda afanele nomthengisi wakho we-cryptocurrency.
Isibonelo sesiginali yokuhweba ye-Chainlink imi kanjena:
Ukubhanqa kwe-Chainlink: LINK / USD
Isikhundla: Thenga i-oda
Inani lokulinganiselwa: $ 29
Misa ukulahlekelwa: $ 24
Thatha-Inzuzo: $ 39
Njengoba ukwazi ukubona ngenhla, abathengisi bethu abasendlini basikisela i-oda lokuthenga kubhangqa le-crypto LINK / USD (Chainlink / idola laseMelika). Lokhu kusho ukuthi ochwepheshe bethu bakholelwa ukuthi inani le-Chainlink lizokhuphuka maduze nje.
Amasiginali we-Crypto nawo anemihlahlandlela eyengeziwe, kufaka phakathi umkhawulo, amanani entengo yokuyeka kanye namanani entengo yenzuzo. Lokhu kuzochazwa ngokuqhubekayo. Lapho waziswa ngesiginali yokuhweba ye-Chainlink evela eqenjini lethu, konke okudingeka ukwenze ukuze ukulandela ngokufaka i-oda nge-crypto broker yakho.
Ziyini Izinzuzo Zezimpawu Zekhwalithi ye-Chainlink Trading?
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani ukubhalisela amasignali ethu wokuhweba weChainlink kungakusiza. Okuphambili kwalokhu ukuthi iziphakamiso zethu zokuhweba ziqondiswe ezinhlosweni zakho zokutshala imali ze-cryptocurrency zesikhathi eside.
Qhubeka phambili ufunde ngalokho okwenza ucwaningo lwethu lubaluleke kakhulu nokuthi luzokusiza kanjani lapho uhweba ngeChainlink:
new.cryptosignals.org yakhiwa iqembu labathengisi abangaphakathi nabanolwazi lweminyaka emkhakheni wezimpahla zedijithali. Sichitha amahora amaningi senza usesikhathini samanje ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe futhi sicwaninga ngezinguquko eziningi ezenzeka ngokuqhubekayo emakethe ye-cryptocurrency.
Ochwepheshe bethu bahlanganisa yonke idatha eqoqiwe, okuholela ezimpendweni okungenzeka ukuthi umtshalizimali we-novice angazange eze nazo.
Ngakho-ke, ngokuba yilungu leqembu lethu lezimpawu zokuhweba ze-Chainlink, uzozuza ocwaningweni oluhlanganiswe ngokuhlaziywa kobuchwepheshe, ama-algorithms obuhlakani bokufakelwa kanye nedatha eyisisekelo.
Ngale ndlela, uzoba nethuba elikhulu lokukhulisa inani lephothifoliyo yakho yokuhweba.
Kuhle kakhulu kubahwebi abangenalwazi
Insiza esiyinikezayo ilungele ama-newbies. Ibuye inikeze ithuba elihle kumalungu anentshisekelo wokufunda ukungena nokuphuma enkundleni ye-cryptocurrency. Sivame ukusabalalisa imininingwane ekunika ithuba lokuthola ukuqonda okuqinile kokuthi sizama kanjani ukuqhubeka nemakethe.
Ngokusobala, uma ungena emakethe yokuhweba nge-idijithali yemali wedwa, kungathatha iminyaka eminingi ukuqonda ngokweqiniso futhi ngalokho - kuholele ekulahlekelweni yimali eningi endleleni. Kungakho i- new.cryptosignals.org ilapha ukuze ikufundise futhi ikuqondise ohambweni lwakho lokuba ngumhwebi ozimele.
Okwamanje, uthola ithuba lokuhweba nge-Chainlink ngaphandle kokwazi okudingekayo kokuphumelela ezimakethe ze-cryptocurrency.
Yiba Nemigomo Ecacile Yokungena Nokuphuma
Thina kwaCryptoSignal.org sikholelwa ngokuqinile ukuthi ukuba nezinhloso zikakhonkolo lapho uhweba ama-cryptocurrensets, njengeChainlink, kubaluleke kakhulu. Ngalesi sizathu, sihlala sithumela izimpawu zethu zokuhweba ngenhloso yokungena nokuphuma.
Lezi zimpawu zikunikeza inkomba ecacile ekuvumela ukuthi ungene / uphume emakethe ngesikhathi esifanele nangamanani entengo amahle kakhulu. Ukwengeza kulokhu, siphinde sikunikeze nge-stop-loss kanye nenani lenzuzo.
Ekugcineni, lapho usuyalile umthengisi wakho oku-inthanethi ukuthi alandele iziphakamiso zethu ze-oda, ngeke kusasala lutho oluphathelene nokuhweba okuthile.
Ukuhweba Ngaphakathi Kwesabelomali Sakho
Ukunquma isabelozimali esingokoqobo isinyathelo esibalulekile ukuze ukhulise imali yakho futhi unciphise noma ikuphi ukulahlekelwa okuzayo ngasikhathi sinye. Lapho waziswa ngesiginali yokuhweba ye-Chainlink, kuhlale kukuthanda kwakho ukukhetha isiteki osithandayo.
Noma kunjalo, ochwepheshe bethu bayeluleka ukuthi ungabeki engcupheni ngaphezu kwe-1% ye-akhawunti yakho yokuhweba. Isibonelo, uma ibhalansi ye-akhawunti yakho ingu- $ 3,000, inani elinconyiwe kusiginali yethu lizoba ngama- $ 30. Noma, uma ibhalansi yakho isendaweni ephezulu futhi ifinyelela ku- $ 15,000, khona-ke singancoma ukuthi kungabekwa ngaphezu kwe- $ 150 ngokuhweba ngakunye.
Ngakho-ke, kuyinqubo lapho uzobona khona ushintsho kunhlokodolobha oyabelwe njengoba izinsuku ziqhubeka. Kepha uma ama-oda wakho enziwa ngokuqonda, ngabe uvula indlela yokukhulisa inzuzo yakho ngendlela enganaki ubungozi.
Zisebenza Kanjani Izimpawu Zethu Zokuhweba ze-Chainlink?
Lapha ku- new.cryptosignals.org, siyazi ukuthi amasiginali wokuhweba aqine kakhulu kumele aqukethe amathiphu amahlanu wedatha abalulekile. Lokhu kuzochazwa ngokuningiliziwe ngezansi:
Njengakwezimakethe ze-forex, ungakhetha ukuthi yiziphi izimali ezithengiswa ngokumelene ne-Chainlink "ngamabili" amele wona. Isibonelo, uma uhweba nge-Chainlink uqhathanisa nedola laseMelika, izomelwa njenge-LINK / USD.
Ochwepheshe bethu baqeqeshelwe ukubhekana nama-crypto-cross kanye ne-crypto-to-fiat ngokufanayo. Ngakho-ke, ungaqaphela ukuthi abathengisi bethu bacwaninga amanani hhayi i-Chainlink kuphela kepha ne-Bitcoin, i-Ethereum, i-Ripple, i-Litecoin ne-Binance Coin - ukusho ezimbalwa. Lokhu kwenziwa njalo nge wena emqondweni, ukunweba nokukhetha ama-horizons amahle kakhulu wokuhweba.
Njengoba i-Chainlink ingathengiswa ngezimakethe ezahlukahlukene, kubaluleke kakhulu ukukhetha umthengisi we-inthanethi ekuvumela ukuthi ubhekane nenani elihle lamabhangqa. Isibonelo somthengisi omkhulu kulokhu kuhlanganisa i-eToro neCapital.com - ngoba inikezela ngohlu olukhulu lwama-cryptocurrensets ngaphandle kokushaja amakhomishini.
Thenga noma Thengisa Isikhundla
Lapho usazi ukuthi yiliphi ipheya le-Chainlink esikukhuthaza ukuhweba, isinyathelo esilandelayo ukuqonda ukuthi ungakwenza kanjani lokho nomthengisi wakho. Akunasidingo sokusho, abahlaziyi bethu ku- new.cryptosignals.org bazohlala njalo bebheka ukuzuza kokubili kusukela ekukhuphukeni kanye nasekuweni kwezimakethe ze-cryptocurrency.
Ngakho-ke, uma isiginali yethu yokuhweba ye-Chainlink ikuholela ekwenzeni i-oda lokuthenga, lokhu kusho ukuthi sicabanga ukuthi laba bobabili bazokhuphuka ngenani.
Ngakolunye uhlangothi, isiginali emelwe njenge 'mfushane' maqondana nendawo yokuthengisa, ibikezela ukuthi laba bobabili bazokwehla ngenani ngesikhathi. Kunoma ikuphi, sikuqondisa kule nqubo ngokucacile ukuze ukwazi ukuthatha izinqumo ezihamba phambili ngokuthengiselana ngakunye, okusho ukuthi ngeke uzizwe umthwalo uwedwa.
Noma ngabe umusha ku-cryptocurrency noma cha, khumbula njalo ukuthi izingcezu ezintathu zolwazi zibalulekile ekwenzeni ukuhweba okunenzuzo - umkhawulo, ukulahleka kokuyeka, kanye nama-oda wenzuzo.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, i-oda elilinganiselwe liyala umthengisi wakho omkhethile inani ongathanda ukungena ngalo emakethe. Isibonelo, ungahle ukhethe ukufaka i-oda lokuthengisa ku-LINK / USD ngo- $ 29. Uma kunjalo, umthengisi wakho uzozibophezela kuphela ekuhwebeni ngentengo yomkhawulo enikeziwe ($ 29) noma ngabe zinjani izimo zemakethe.
Kukhona noku-oda kwemakethe, okukuvumela ukuthi ungene ngokushesha emakethe ngentengo elandelayo etholakalayo. Kodwa-ke, abathengisi bethu abakaze basebenzise lokhu, ngoba umuntu akakwazi ukukhetha ngqo inani lokungena.
Ukuhamba kwakho okulandelayo ukuqhubekela kumthengisi okhethwe nguwe, faka i-oda elinomkhawulo bese ufaka nje inani lokungena esilincomile ngesiginali yethu yokuhweba ye-Chainlink.
Intengo Yokuyeka Ukulahlekelwa
Intengo yokulahleka kokumisa iyazichaza futhi yaklanywa ngenhloso ukukhawulela ukulahleka ezimakethe eziguqukayo zokuhweba. Ochwepheshe bethu abasebenza ezindlini baqinisekisa njalo intengo yokulahleka okungadluli ukulahleka okungu-1%.
Kusukela ngo-2014, iqembu lethu liyaziqhenya ngokubamba irekhodi lokwenza inzuzo engaguquguquki; noma ngabe ukulahleka kuyingxenye yengozi yokuhweba online. Ngalesi sizathu, abahlaziyi bethu baqinisekile ukuthi ngocwaningo lwabo - bakhiqiza futhi bathumele amanani anekhono kakhulu wokulahleka kokuyeka.
Encwadini efanayo, intengo yenzuzo yenzelwe ukuqinisekisa ukuthi izinzuzo ezenziwe azilahlekile. Lesi yisizathu sokuthi amasignali wokuhweba weChainlink ahambe ngokwakha izinhloso ezicacile zokuphuma futhi abelane ngazo nawe.
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, sibhekisa isilinganiso semiklomelo engcuphe engu-1: 3 - ukuze kuthi uma ufaka i-oda esigxotsheni esingu- $ 60, singahlose ukuthola inzuzo engu- $ 180. Yize kunjalo, izimpawu zethu zokuhweba zeChainlink nazo zizoba nentengo yoku-oda inzuzo. Kuleli qophelo, kubalulekile ukufaka inani ngalinye lokuhlosiwe elinconyiwe kumthengisi wakho.
I-Chainlink Trading Signals Telegram Group
Ekuqaleni, thina ku- new.cryptosignals.org sasisebenzisa ukuthumela zonke izimpawu zethu zokuhweba nge-imeyili. Yize izimpawu zethu zazizuzisa kakhulu, lolu hlelo lube nezingqinamba ezithile. Enye yazo ukuthi amaklayenti ethu bekufanele avuselele ibhokisi labo lokungenayo njalo ukuze aqinisekise ukuthi awaphuthelwa yithuba lokuhweba elinenzuzo.
Ngenxa yaleli qiniso, manje sisebenzisa uhlelo lokusebenza lweTelegram. Kuyisiteji esihle kakhulu esisebenziseka kalula futhi esivumela ukuthi sithumele zonke izeluleko zethu zokuhweba ngesikhathi sangempela. Ngokuphumelelayo, izaziso zakho zifika kuwe ngesikhathi esiqondile esizithumela ngaso isignali yethu yokuhweba!
Isiginali ngayinye izoqukatha incazelo yobuchwepheshe obusekela izizathu zeziphetho zethu maqondana nokuhweba kwakho nokuthi ungasivikela kanjani isikhundla nomthengisi wakho. Sizophinde sikufundise ngezethulo zamashadi namagrafu, ngemuva kwalokho sikusize ukungena kwakho emhlabeni wokumaketha we-cryptocurrency.
Izimpawu Zamahhala Zokuhweba ze-Chainlink
Uma ungakanqunywa ngokubhalisela amasiginali wethu wokuhweba we-Chainlink, sivumele sikunikeze umbono omuhle wokuthi kungaba njani uma uzojoyina. Inketho yokuqala yokusebenzisa ngokunenzuzo ukuthi sithumela amasiginali amathathu okuhweba MAHHALA we-crypto njalo ngesonto eqenjini lethu leTelegram.
Lezi zimpawu zizoqukatha izeluleko ezifanayo esizinikeza amalungu ethu we-premium, ngakho-ke ngeke ulahlekelwe ngamasu abalulekile wokuhweba. Izimpawu zamahhala zizofaka amaphuzu abalulekile edatha esikhulume ngawo ngenhla; ama-crypto pair okukhulunywa ngawo ngokuhweba, intengo yokuma kokulahleka kanye nentengo yokuthatha inzuzo.
Ngemuva kwalokho, lapho uqala ukuzwa amasiginali wethu wokuhweba nge-crypto, ngeke ukwazi ukuzuza kuphela emakethe yempahla yedijithali - kepha funda lapho uqhubeka. Futhi, uma ukhetha insizakalo yama-crypto yamahhala, ungasivivinya ngaphambi kokuqhubeka nohlelo lwethu lwe-premium.
Izimpawu Zokuhweba ze-Premium Chainlink
Sivumele sichaze ongakulindela uma usujoyine ubulungu bethu be-premium obusha be- new.cryptosignals.org.
Izinhlelo zethu zikunikeza ukufinyelela kwezimpawu zekhwalithi ezi-3 nsuku zonke - (ngoMsombuluko -Lwesihlanu), ukwanda okukhulu okuvela kwisevisi yethu yamahhala yeTelegram. Ngenxa yalokhu, iningi lababhalisile bakhethe ukuqhubeka nokusebenzisa isevisi yethu ye-premium ukuze bathole okuningi kwizimpawu zethu zekhwalithi.
Sihlala sobala ngalokhu esikwenzayo futhi sikumema ukuthi ubheke uhlu lwethu lwamanani ngaphambi kokujoyina nathi:
Inyanga engu-1: £ 35
Izinyanga ezi-3: £ 65
Izinyanga ezi-6: £ 95
Izinyanga ezi-12: £ 175
Uma ukhathele ukuthi uhlelo lwethu lwe-premium luyindlela engcono kakhulu kuwe, khona-ke new.cryptosignals.org inika amandla isiphakamiso esingenabungozi.
Ngemuva kokubhalisela kolunye lwezinhlelo zethu ze-premium, amalungu amasha azitholela isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30. Ungahle ubuze ukuthi kungani sikwenza lokhu - futhi impendulo yethu ukuthi siqinisekile ukuthi insiza yethu ilungele amalungu amasha namalungu angahle abe khona kungakhathalekile ukuthi analuphi uhlobo lokuhweba nezinhloso zawo.
Izimpawu Zokuhweba zeChainlink - Isu Elingenabungozi
Lapho usubhalisele ku-new.cryptosignals.org ukuthola uhlelo lwe-premium - unezinsuku ezingama-30 ngokuzenzakalela zokuzama ukusevisa. Ngalokhu, sincoma kakhulu ukuthi uthole umdayiseli onikeza ne-akhawunti yedemo yama-brokerage yamahhala. Lokhu kuzokuvumela ukuthi uhwebe amasiginali wethu we-crypto bese uqala ukuzibandakanya nemakethe yemali yedijithali ngaphandle kwengozi yokulahlekelwa yimali!
Uhlu olungezansi lukukhombisa ukuthi yini okudingeka uyenze ngendlela yesinyathelo nesinyathelo:
Khetha i-Crypto Broker. Ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi uthola eyodwa evumela ukuthi wenze ibhizinisi ngokukhetha okuhle kwezimakethe ezifana ne-eToro noma iCapital.com. Banikela ngenketho enkulu yamabhangqa we-cryptocurrency ngaphandle kokuthi udinga ukukhokha noma iyiphi ikhomishini.
Qala nge-akhawunti yokuhweba yedemo nomthengisi omkhethayo.
Bhalisela uhlelo lwe-premium nathi ku- new.cryptosignals.org.
Joyina isiteshi sethu se-VIP Telegram.
Lapho uthola isignali yakho yokuqala yokuhweba - yenza i-oda lethu eliphakanyisiwe nge-akhawunti yakho yedemo yomthengisi esanda kudalwa.
Ngemuva kwamasonto ambalwa, hlola ku-akhawunti yakho bese uzibonela inzuzo oyenzile.
Uma wanelisekile ngezinsizakalo zethu futhi uma ufisa ukuqhubeka nomsebenzi wakho wokuhweba, kunethuba lokuthi sikuphakamisa ukuthi ucabangele ukukhetha olunye lwezinhlelo zethu ezinde. Lokhu kuzonciphisa izindleko zanyanga zonke zezimpawu zethu ze-premium futhi ngaleyo ndlela - zikutholele isivumelwano esingcono kakhulu.
Uma ukhetha ukufuna isiqinisekiso sokubuyiselwa imali - okumele ukwenze nje ukusazisa ngesinqumo sakho zingakapheli izinsuku ezingama-30 ubhalisile futhi uzobuyiselwa okubhalisile.
Ukukhetha i-Crypto Broker yezimpawu ezihamba phambili zokuhweba ze-Chainlink
Njengoba kungenzeka ukuthi usubonile manje, siyaqhubeka sigcizelela ukuthi kubaluleke kangakanani ukusebenzisa i-crypto broker esezingeni eliphakeme kusuka ekuhambeni. Lokhu kungenxa yokuthi kuzoba ukuxhumana okuqondile phakathi kwakho namabhizinisi akho.
Ngamanye amagama, umthengisi uzobe enza ama-oda ethu aphakanyisiwe njengoba ucabanga emakethe yokuhweba ye-Chainlink.
Izigaba ezilandelayo zizokunikeza umhlahlandlela osheshayo wokuthi yini okufanele uyibheke ngaphambi kokukhetha umthengisi wakho we-Chainlink.
Imali kanye namaKhomishini
Phakathi kwezindlela eziningi lapho abathengisi be-crypto bangenza imali - eyodwa ukukhokhisa amakhasimende ayo inani elithile lezimali namakhomishini. Ukuze kucace, abaningi balaba bathengisi be-crypto bangakhokhisa ngaphezu kuka-2% ekuhwebeni ngakunye okwenzayo. Lesi yisona sizathu esikhulu esenza abathengisi abaningi be-crypto bakhethe ukusebenzisa izinsizakalo ze-eToro noma iCapital.com.
Ngaphezu kwakho konke, laba bathengisi abaku-inthanethi banenqubomgomo yemali ekhokhwayo engu-0% - ikunikeza ithuba lokuhweba ezimakethe ze-cryptocurrency ngemali ephansi. Ngakho-ke, kucace bha ukuthi amasignali ethu okuhweba we-Chainlink - eceleni kwe-eToro neCapital.com, enza umdlalo ofanele! Njengoba sishilo phambilini, inhloso yethu eyinhloko ukukhomba ukuzuza okuncane - ngakho-ke ngeke kudingeke ukhathazeke ngemali yokuhweba ekwehliseni inzuzo yakho.
Isici esibalulekile esidinga ukucatshangelwa 'ukusabalala' - okuwumehluko phakathi kwebhidi kanye nentengo yokucela yepheya le-Chainlink olidayisayo. Empeleni, igebe phakathi kwalezi zintengo liya likhula - lapho ukhokha kakhulu umthengisi wakho. Ukusabalala kungashintsha ngayo yonke imakethe nempahla - ngakho-ke ungakushayi indiva lokhu lapho ukhetha i-inthanethi broker yakho eku-inthanethi.
Lapho uzazisa ngezinketho ze-crypto broker, ungakhohlwa ukukhetha eyodwa esebenza kungxenyekazi enelayisense ngokuphelele. Isizathu salolu lwazi ukuthi ingxenye enkulu yokuhwebelana nge-idijithali yemali ayilawulwa - ivumela noma ngubani ukuthi avule i-akhawunti ngaphandle kokunikeza imininingwane yakhe.
Iqiniso ukuthi uzocelwa ukuthi ubeke engcupheni iphesenti lemali yakho emakethe ye-crypto, ngakho-ke ukuqinisekisa ukuthi izinzuzo zakho ziphephile kubalulekile. Kungakho siphakamisa ukuthi kubhekwe i-eToro neCapital.com - ngoba womabili amapulatifomu alawulwa kakhulu.
Izimakethe ze-Crypto ezisekelwayo
Njengoba kushiwo ngaphambili, izimpawu zethu zokuhweba nge-crypto zizobheka ezimakethe ezahlukahlukene. Isibonelo, ungahle waziswe ngababili be-crypto-cross njenge-LINK / BTC. Esikhathini esithile ngemuva kwalokho, ungezwa kithi ngokuhweba nge-crypto-to-fiat njenge-LINK / USD.
Unalokhu engqondweni, kufanele uthole umdayiseli oku-inthanethi okuvumela ukuthi ufinyelele ekukhetheni okukhulu kwezimakethe ze-cryptocurrency. Lokhu kuzokunika ukufinyeleleka ukuze wenze ngokuvumelana nezimpawu zethu zokuhweba ze-Chainlink - konke ngokusebenzisa indawo eyodwa yokuma okuthembekile yokuhweba.
Imali, Ukuhoxiswa kwemali, kanye Nezinkokhelo.
Ungahle ufune ukufaka nokukhipha izimpahla usebenzisa imali ye-fiat. Uma kunjalo, uzodinga ukusebenzisa umthengisi olawulwa ngokuphelele. Njengoba sishilo, inani elikhulu lokushintshana alilawulwanga, ngakho-ke kwamukelwa kuphela izinkokhelo ze-cryptocurrency.
Kusuka kokuhlangenwe nakho, i-eToro neCapital.com kulula kakhulu ukufaka imali - ngoba amapulatifomu amukela wonke amakhadi amakhulu wedebithi / wesikweletu afana neVisa, Maestro neMastercard. Laba badayisi baphinde basekele izinhlobo ezahlukahlukene zama-e-wallets. Ngokuya ngendawo okuyo manje, ungasebenzisa iKlarna / Sofort Banking noma ezinye izindlela zokukhokha zasendaweni.
Ngokuya ngemali ekhokhwayo, izindleko zediphozi ze-eToro zingama-0.5% kuphela. Kodwa-ke, uma ukhetha ukukhokhela i-akhawunti yakho usebenzisa i-USD njengendlela yokukhokha, umthengisi uzokhipha le mali engu-0.5%. Ukubeka lokhu ngombono - I-Coinbase ikhokhisa imali engu-3.99% kumadiphozi ekhadi lasebhange!
Qalisa Ngezimpawu ezihamba phambili zokuhweba ze-Chainlink Namuhla
Uma nge new.cryptosignals.org ukuthole okudingayo, ukusayina nathi kulula kakhulu. Ngezansi uzothola umhlahlandlela ngezinyathelo odinga ukuzithatha ukuze uqale ukusebenzisa amasiginali wethu wekhwalithi we-Chainlink:
Isinyathelo 1: Joyina new.cryptosignals.org
Ukuze uthole amasiginali wethu wokuhweba we-Chainlink kufanele uvule i-akhawunti ku- new.cryptosignals.org:
Umehluko phakathi kwensiza yethu yamahhala (amathiphu amathathu okuhweba masonto onke) nokubhalisela enye yezinhlelo zethu ze-premium ubalulekile, kanti lokhu kukunika inzuzo yokuthola amasiginali ama-3 ngosuku kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, unyaka wonke!
Kukhokhisiwe Monthly £ 35
Izimpawu ze-2-3 Nsuku Zonke
Isilinganiso sempumelelo esingu-82%
Ukungena, Thatha Inzuzo & Misa Ukulahlekelwa
Isamba Sobungozi Ngohwebo Lonke
Ubungozi Umklomelo Isilinganiselo
Edume kakhulu Kukhokhisiwe Quarterly £ 65
Kukhokhisiwe IBI-ANNUALLY £ 95
Kukhokhisiwe Minyaka yonke £ 175
Futhi cabanga - sinikeza ngokuzenzakalela isiqinisekiso sokubuyiselwa imali ezinsukwini ezingama-30 kuwo wonke amalungu ethu e-premium plan - ngakho-ke ngeke kube khona ukulahleka uma ufuna ukusizama!
Isinyathelo 2: Joyina iqembu lethu le-Crypto Trading Signal Group
Lapho wenza i-akhawunti yakho nge- new.cryptosignals.org - sizokuthumela i-imeyili yokuthi ungajoyina kanjani iqembu lethu le-VIP Telegram.
Ukuze kube nokusebenziseka, ngaso sonke isikhathi kungcono ukusetha isaziso sangokwezifiso ukuze ubone ngokushesha lapho uthola isignali yokuhweba evela kithi. Lokhu kuzosiza isenzo sakho sisheshe lapho uthola i-oda lakho nomthengisi wakho we-inthanethi we-cryptocurrency.
Isinyathelo 3: Faka ama-oda wesiginali we-Chainlink Trading
Lapho uthola isignali yokuhweba ye-Chainlink evela kithi, konke okusele ukuthi ukwenze ukufaka imininingwane ye-oda lakho nomthengisi wakho omkhethile.
Isiginali izoba nepheya le-Chainlink nokuthi limele ukuthenga noma isikhundla sokuthengisa. Izophinda income umkhawulo, intengo yokuthatha inzuzo nentengo yokuyeka ukulahleka.
Ekuphetheni, izimpawu zethu zokuhweba zeChainlink zivula indlela eya emakethe ye-cryptocurrency ongazuza kuyo. Lokhu kusho - ungahweba njengomhwebi onesipiliyoni ngenkathi iqembu lethu lihlanganisa yonke idatha edingekayo ukukusiza ekufezeni izinhloso zakho zokuhweba. Konke okudingeka ukwenze ukufaka ama-oda ethu aphakanyisiwe nomthengisi omkhethile.
Ngakho-ke, uma uzizwa usukulungele ukwamukela izinzuzo ezigcwele zezimpawu zethu zokuhweba ezilinganiselwe nezilinganiselwe, khetha uhlelo oluhle kakhulu lwe-premium. Khumbula, sinikeza ilungu ngalinye elisha isiqinisekiso sokubuyiselwa imali esigcwele sezinsuku ezingama-30 - okusho ukuthi i- new.cryptosignals.org ikusiza ngayo yonke indlela!